यी हिरोइनले पाइन् राष्ट्रिय क्रसको उपाधि - Media Dabali
साउथ इन्डियन चलचित्र अभिनेत्री रश्मिका मन्दानालाई गुगलले २०२० को भारतकी राष्ट्रिय क्रसको उपाधि दिएको छ । अब, गुगलमा ‘नेशनल क्रस अफ इन्डिया’ भनेर सर्च गरियो भने अभिनेत्री रश्मिका मन्दानाको नाम आउने छ ।
उनको जन्म सन् १९९६ अप्रिल ५ मा कर्नाटकको विराजपेटमा भएको थियो । उनले सन् २०१६ मा रिलिज भएको चलचित्र ‘किरिक पार्टी’ बाट चलचित्रबाट डेब्यू गरेकी हुन् । पहिलो चलचित्रबाटै चर्चा कमाएकी उनले त्यसलगतै अन्य दुई ठूला चलचित्र ‘अन्जनी पुत्र’ र ‘चमक’ मा काम गर्ने मौका पाइन् ।
हालसम्म उनका १० वटा चलचित्र रिलिज भइसकेका छन् भने चारवटा चलचित्रको छायांकन जारी छ ।
पहिलो 'डेट'मा निक जोनसले प्रियंकलाई किन 'किस' गरेका थिएनन् ?
साउथ इन्डियन फिल्मकी नायिका रकुल अदालतमा, के हाे मुद्दा ?
महानायक राजेश हमालले गरे ११३ फिल्म प्राविधिकलाई सहयोग
सुशान्त सिंह प्रकरणमा मुछिए सलमान र करण जोहर, अदालतले दियो यस्तो आदेश
सारा र श्रद्धाको नामपनि जोडियो सुशान्त आत्मह त्या प्रकरणमा
भायानेटको ब्राण्ड एम्बेसडरमा निश्चल र स्वस्तिमा
मंगलवार, आश्विन ६ २०७७०७:४३:१८